Ciidaha Farxadda leh ee ka socda Dutchtown Past • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ciidaha Farxada leh ee ka soo jeeda Dutchtown Past
Saadaasha hore waxay soo jeedineysaa inaanan ku sugneyn Caddaan Kirismas ah sanadka 2020. Si kastaba ha noqotee, sawiradan barafka laga soo qaaday ee Dutchtown ee la soo dhaafay ayaa naga dhigay ruuxa ciidaha! Sawiradan duugga ah waa laba xaafadood oo caan ah marna ku yaalay Downtown Dutchtown una dhow Meramec Street iyo Virginia Avenue.
Dusha sare waa Barnard Mansion, oo horey ugu dhowaa geeska Meramec Street iyo Virginia Avenue. Hoos waxaa ku yaal John Withnell Dunn House oo mar istaagay 3400 ee Meramec.
Sawirada taariikhiga ah waxaa midabeeyey Mark Loehrer. Mark waa taariikhyahan maxalli ah oo maamula Taariikhda Magaalada Arch Koontada 'Instagram' oo ay ku jiraan kumanaan sawirro midab leh oo laga soo qaaday xaafadaha ku yaal magaalada St. Waxaa jira Dukaanka internetka Arch City History halkaas oo aad ka iibsan karto daabacaadda sawirro badan oo qiimahoodu hooseeyo.
Uruurinta Mark waxaa ka mid ah daraasiin of Dutchtown sawiro u qalma jagadooda maalin uun. Haatanse, annaga oo u bogaya jiilaalka cajaa'ibka leh ee ku hareeraysan guryahan quruxda badan, waxaan si dhow u eegi doonnaa shakhsiyaadka saamaynta ku leh guryahaas oo ahaa dhowr ka mid ah muwaadiniintii ugu horraysay ee Dutchtown.
Guriga John Withnell Dunn waxaa la dhisay 1873-dii oo ku taal 3418 Meramec Street. Dunn wuxuu adeer u ahaa John Dunn, qandaraasle iyo dhagax-sameeye dhagax dhisay oo dhisey Old Cathedral iyo Missouri State Capitol labadaba. Adeerku wuxuu kaloo ku deeqay dhisme yar oo ku yaal Dutchtown oo loo adeegsaday inuu noqdo St. Anthony ee Padua meeshii ugu horreysay ee la isugu yimaado.
John Withnell Dunn wuxuu ahaa xubin seddex jeer xubin ka ah Missouri House of Delegates kaas oo hanti yar ka sameeyay hantida ma guurtada ah. Wuxuu ahaa mid ka mid ah kaniisada firfircoon ee St. Thomas ee Aquin Catholic Church. Kaniisadda ma sii shaqeynayso, laakiin kaniisadda iyo iskuulku wali waxay taagan yihiin woqooyiga Laclede Park ee Iowa iyo Osage.
Dunn sidoo kale wuxuu ahaa sawirqaade hiwaayad caan ah wuxuuna xubin ka ahaa kooxda 'St. Louis Camera Club' intii lagu gudajiray sawir qaadashada dabayaaqadii 1800s. Wiilkiisa, JW Dunn, Jr, wuxuu umuuqday inuu ku faraxsanyahay wadaagista aabihiis sawir qaadista kadib markii odaygu dhintay.
Sawirro uu qoray John Withnell Dunn oo ka soo muuqday St. Louis Star iyo Times.
Dunn wuxuu ku gudbay 1931 da'da 86. Waxaa lagu aasay Qabuuraha Calvary kadib aas ka dhacay St. Thomas ee Aquin. Guriga ayaa la dumiyay 1940-yadii si loogu sameeyo suuq weyn. Dhismaha beddelka ayaa hadda hoy u ah Xarunta Beesha Resalat.
Dr. William DW Barnard wuxuu ahaa mukhaadaraad jumlo ka ganacsada oo ka dhistay gurigiisa magaalada Dutchtown ka hor Dagaalkii Sokeeye. Guriga ku yaal 3316 Meramec Street wuxuu ku fadhiistay dhul ballaadhan. Mar dambe ayaa guriga loo wareejiyay geeska ilaa 4227 Virginia Avenue. Guriga ayaa la dumiyay 1962 si loogu banneeyo dhismaha dabaqa hoose ee hadda jira.
Barnard wuxuu qaraabo la ahaa qoyska Dent iyo ina adeerkiis Julia Dent, afada General Ulysses S. Grant. Barnards ayaa mar ku martigaliyay Deeqaha gurigooda South Side. Markii Grant uu kaliya ahaa gaashaanle ka tirsan Ciidanka, Barnard wuxuu u fidiyay gargaar lacageed markii loo baahdo. Mar dambe, Madaxweyne Grant ayaa soo celin lahaa raalli ahaanshaha markii uu Barnard la kulmay dhibaatooyin ganacsi.
Barnard wuxuu ku gudbay Isbitaalka Magaalada 1902 isagoo jira 74.
Haddii aad raadineyso taariikh badan oo ka timaada Dutchtown iyo wixii ka sii dambeeya, u gudub dhinaca Bogga Taariikhda Magaalada Arch. Oo hubi qaar ka mid ah daabacado iib ah—Waxay sameeyaan hadiyado ciid wanaagsan!
Filimka hoos Taariikhda Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. naqshadaha, Taariikhda Dutchtown, Iyo Sawir. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay December 14th, 2020 .
DutchtownSTL.org Taariikhda Dutchtown Ciidaha Farxada leh ee ka soo jeeda Dutchtown Past